China Gelatin 40 Mesh ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Mesh ehlukene ihambelana nosayizi bezinhlayiya ezihlukile. Okukhudlwana i-mesh, i-particle enhle kakhulu. Emakethe yamanje, i-gelatin 40 mesh isetshenziswa kabanzi.
I-Gelatin 40 mesh i-colloid evikelayo ephumelelayo, engavimbela ukuhlanganiswa kwamakristalu noma ama-ion. Isetshenziselwa ukuzinzisa ukumiswa okuyindida futhi isetshenziswa njenge-emulsifier emafutheni ekusakazekeni kwamanzi.
I-Gelatin 40 mesh futhi inezinto eziningi ezinhle kakhulu ezisebenzayo, njengokuphathwa kwamanzi, ukwakha ifilimu, ukugcizelela nokwenza amagwebu.
Futhi sinikezela nge-gelatin kusuka ku-8 mesh kuya ku-60 mesh
IGelken gelatin ingahlinzeka ngezixazululo ezahlukahlukene zokufaka nezidingo zamakhasimende ngamanye. I-Gelken gelatin ilungele ukusetshenziswa njenge-gelling agent, stabilizer, adhesive, emulsifier, ifilimu ne-ejenti ekhihliza amagwebu, ishukumisa usizo nomphathi. Umkhiqizo ungangezwa ekukhiqizweni kokudla ukunciphisa amafutha, i-carbohydrate kanye nekhalori okuqukethwe komkhiqizo, noma ukucebisa okuqukethwe kwawo kwamaprotheni nokwenza ngcono ukunambitheka komkhiqizo. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezahlukahlukene zabathengi.
Ochwepheshe be-gelatin baseGelken abagcini ngokusekela amakhasimende ekwakheni imikhiqizo emisha, kepha futhi balungiselela nefomula ekhona. Izinketho zethu cishe zingenamkhawulo. Kusuka ku-fudge, fudge chewy, marshmallow kuzo zonke izinhlobo zama-dessert, i-yogurt, i-ayisikhilimu, i-cake glaze nokugxila kujamu, imikhiqizo yenyama nokunye, singakunika ukusekelwa okuthembekile kwasendaweni.
I-gelatin yethu iwukudla kwamaprotheni okumsulwa nekhwalithi ephezulu okukhiqizwa ngezinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme zezilwane kanye nezinsizakusebenza eziphambili kakhulu zezimboni. Izinto zokusetshenziswa ze-gelatin izingulube, inyama yenkomo noma inhlanzi. Ikhwalithi ye-gelatin ingaqinisekiswa ngobuchwepheshe bekhwalithi ephezulu. I-Jiekang gelatin ingumkhiqizi ohola phambili womhlaba wonke we-gelatin, collagen kanye ne-collagen peptides. Sisebenzisa izithako zemvelo ezihlanzekile, ezimsulwa nezingezona ezomzimba ukukhiqiza ukudla “ngamalebula ahlanzekile.”
Langaphambilini Ingulube Gelatin
Olandelayo: IGelatin 250 Bloom